Jumia Nigeria Xeerarka kuubanka
Ilaa 30% Ka Dhimista Guud ahaan Ku soo dhowow boggayaga kuubannada Jumia Nigeria, sahamin jumia.com.ng qiimo -dhimisyadii iyo xayeysiisyadii ugu dambeeyay ee Sebtember 2021. Maanta, waxaa jira wadar ahaan 50 rasiidh Jumia Nigeria iyo heshiisyo dhimis. Waxaad si dhakhso leh u shaandhayn kartaa koodhadhka xayeysiinta Jumia Nigeria maanta si aad u hesho dalabyo gaar ah ama la xaqiijiyay.
10% Ka baxsan Amarkaaga Jumia waxay leedahay doorashooyin lacag-bixineed oo qof walba ku habboon, waxayna haystaan ​​ikhtiyaar lacag-bixin-bixineed oo loogu talagalay ku-habboonaanta dheeraadka ah. U hel qiimo dhimis weyn 27 Jumia Nigeria coupons jumia.com.ng Adeegso koodka xayaysiinta iyo iibinta Jumia Nigeria 2018 si aad u hesho kayd dheeraad ah oo ku saabsan dalabyada waaweyn ee horeba jumia.com.ng
30% Dheeraad ah oo Ka Baxsan Guud ahaan Jumia Nigeria Coupon 2021 aad jumia.com.ng Wadarta 19 firfircoon jumia.com.ng Xeerarka Gudbinta & Heshiisyada waa la taxay oo kii ugu dambeeyay waxaa la cusboonaysiiyay Oktoobar 09, 2021; 12 rasiidh iyo 7 heshiis oo bixiya ilaa 85% dhimis, 500 Off iyo qiimo dhimis dheeraad ah, hubi inaad isticmaasho mid iyaga ka mid ah marka aad wax ka iibsanayso jumia.com.ng; Dealscove wuxuu ballan qaaday inaad heli doonto waxa ugu fiican...